Home Wararka Beesha Ceyr oo ka qaybgalayso shirka Hobyo & Kheyre oo balantii loga...
Beesha Ceyr oo ka qaybgalayso shirka Hobyo & Kheyre oo balantii loga baxay
Beesha Ceyr oo fulinaysa codsi uga yimid Xasan Kheyre ayaa in mudo ah ka biyo diidsanayd in ay ka qayb gasho shirka beelaha Habargedir ee ka furan magalaada Hobyo. Xasan Kheyre ayaa da’daalo badan ku bixiyay in shirka Hobyo fashilmo. Waxa uu si gooni gooni ah ula kulmay beelaha Habargedir isaga oo ka hor imaanaya shirka Hobyo oo uu arkaayay in uu ka soo horjeedo danahiisa gaarka.
Hadaba sadaxdii maalin ee u danbeeysay waxa ka socotay magalooyinka Muqadisho iyo Guriceelba shirar la xiriira shirka Hobyo iyo in ay Beesha Ceyr ka qaybgasho. Ugu danbeeyntii waxaa beeshu go’aansatay in ay shirkaas ay ka qayb galaan.
Beelaha Habargedir ayaa ku adkeeysay beesha Ceyr in ka qaybgalka shirka Hobyo uu noqdo mid ay yimaadaan wafdi uu hogaaminayo ugaaska beesha Ceyr hadii kale ka soo qaygalkooda ma ahaan doono mid daacad ay ka tahay beesha oo dhan.
Ugu danbeeyntii waxaa la isla gartay in shirka Hobyo ay beesha Ceyr si buuxda uga ka qaybgasho shirkaas, wafidaga beesha waxa hogaaminayo Ugaaska beesha Ceyr. Mid ka mida odoyaasha dhaqanka beesha Ceyr ayaa cawaa u sheegay wariyaha MOL ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb in beeshu tagi doonto shirkaas. Waxa yiri “waan ognahay in Xasan Kheyre nagu danaysanayo, caqlina maha in aan ka harno walalaha Habargedir oo aan waligeen inta aanu aduunka joogno aanu ahaan doono walalo”.
Xasan Kheyre ayaa caawa waxa uu dhex fadhiyaa fashilkii ugu danbeeyay, waxaana isku soo haray isaga iyo kooxda Alu Sunna Wajameeca oo caawa isku horfadhiya Dhuusamareeb..Su’ashu wax ay tahay Xasan Kheyre ma ku qancin doonaa beesha Ceyr in ayan tagin shirka beelaha Habargedir ee Hobyo?